Huisheng Smart Tech dia marina tsara machining fitaovana orinasa ny laza ho avo lenta sy ny fahafahana mamokatra amin'ny faritra sarotra machined tena tsara vidy. Miorina ao Shenzhen ao Shina, ho toy ny sampana Kai Da Feng nampidirina Company izay Tafapetraka ao 2007.
ny orinasa manana 140 avo-fametrahana mazava tsara CNC nitodika lath milina, 130 avo-fametrahana mazava tsara CNC mihaohao lath milina, ary mihoatra ny 350 peripheral fitaovana, dia fitaovana amin'ny singa sy ny quadratic toratelo mizaha toetra singa equipments.Our orinasa manana mihoatra ny 400 mpiasa sy ny famokarana faritra mihoatra 10.000 metatra toradroa, varotra isan-taona ny vola miditra dia manakaiky ny 150 tapitrisa yuan.
Na inona na faritra amin'ny rafitra tsotra na sarotra dia afaka manao toy ny isan-mpanjifa azy io ny ampahany na ny santionany famolavolana, CNC mihaohao afaka hahatratra 0.05mm fandeferana. Afaka hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa samihafa ho fametrahana mazava namboarina CNC machined faritra.
Mihoatra ny 400 ny mpiasa voaofana tena mpanamboatra faritra fametrahana mazava tsara amin'ny fomba tsara indrindra.
Efa nitombo ny mampiasa mihoatra ny 400 tehina. Fampidirana FABRICATION sy ny machining atrikasa 10000 metatra tora-droa, fitaovana rehetra ny teknolojia farany indrindra.
Hs manan-tsaina mampisaraka ny fitsaboana, varahina sy ny tsy-leaded varahina trano.
Hs manan-tsaina dia ISO 9001, ISO1400and IATF16949 fanamarinana ara-panjakana.
GD faritanin'i mitoetra amin'ny fifanarahana sy ny orinasa bola
National teknolojia avo-toeram-piasana
-Pirenena modely vaovao ilàna patanty 8 entana